भर्खरै बिराटनगरकाे अस्पतालमा ठुलो आवाज आएपछि विरामी भागाभाग! – PathivaraOnline
Home > समाचार > भर्खरै बिराटनगरकाे अस्पतालमा ठुलो आवाज आएपछि विरामी भागाभाग!
admin July 1, 2020 July 1, 2020 समाचार	0
विराटनगरको म्याक्स इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड ट्रमा सेन्टरमा पेट्रोल ब’म प्रहार भएको छ । बुधबार बिहानको समयमा स्कुटीमा आएका तीनजनाको समुहले अस्पतालको पछाडिबाट पेट्रोल ब’म प्र’हार गरेको हो । बियरको बोतलमा बनाएको सो ब’मको प्रहारले अस्पतालमा क्षति नपुर्याए पनि उपचारार्थ भर्ना रहेका बिरामीहरु भागाभाग भएको थियो । करिव तीन बजेतिर उनीहरु मदिराले मातिएर अस्पतालको मुल गेटबाट अस्पतालको परिसरमा छिरेका थिए ।
अस्पताल परिसरमा प्रवेश गरेपछि अपशब्द बोल्दै गालीगलोज गर्न थालेपछि आकस्मिक विभागका चिकित्सकसहित अस्पतालका कर्मचारीहरुले गार् मार्फत गेटबाहिर निकालेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक हेमनारायण मेहताले कर्मचारीहरुले तीन वटा गार्डको सहयोगले तीनै जनालाई बाहिर निकालेर मुल गेटमा ताला लगाएको जनाए । निकालेपछि तथानाम गाली गर्दै स्कुटीमा गएको महताले बताए । अस्पतालबाट बाहिर निकाल्ने क्रममा उनीहरुले गार्ड पेसल बस्नेतमाथि हातपात गरेका मेहताले बताए ।
गएको केही समयपछि अस्पतालको पछाडि रहेको बलभद्र मार्गबाट बियरको बोतलमा बनाएको पेट्रोल ब’म अस्पतालको परिसरमा फ्याएको मेहताले बताए । अगाडिको गेटबाट बाहिर निकालेपछि उनीहरु अस्पतालको पछाडिको गेटबाट प्रवेश गर्न खोजेका तर गार्डले गेट नखोलेपछि प्रहार गरेर भागेको उनको भनाइ छ। ‘गेट खोलेको भए भित्र आएर पड्काउने थिए’, उनले भने,‘गार्डले गेट नखोलेकाले फ्याकेर गयो । ‘
ठूलो अवाज आएपछि बिरामीहरु भागाभाग भएको उनले बताए । उपचार्थ भर्ना रहेका ८ जना बिरामी मध्ये एक जनाले डिस्चार्जसमेत लिएर गएको बताए । मोरङको सुन्दरहरैचाका खगेन्द्र लुइटेलले उपचार कै क्रममा बिहान डिस्चार्ज लिएर अर्को अस्पतालमा गएको उनले बताए । ‘अरु बिरामीहरु पनि डिस्चार्ज माग्दै छन्’, उनले भने, ‘हामीले बिहानै देखि सम्झाएर राखेका छौँ।’
अस्पतालका अध्यक्ष सतरुधन यादवले कसैसँग कुनै विवाद नभएको र अस्पतालमा भय सिर्जना गर्न खोज्नेलाई कारवाही गर्नु पर्ने माग गरे । ‘कसैसँग विवाद भएको छैन, किन तान्डव मचाए म नै आश्चर्यमा परेको छु’, उनले भेन । यसैबीच सो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।विराटनरगर ११ का मेलिस लामा र सन्तबहादुर तामाङलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काले जानकारी दिए ।
अस्पताल प्रशासनले बुधबार बिहान पेट्रोल ब’म प्रहार भएको बताउँदै आए पनि प्रहरीले पेट्रोल ब’म नभएको जनाएको छ । मदिरा सेवन गरेको समुहले बियरको बोतल अस्पतालमा प्रहार गरेको प्रहरी उपरीक्षक खड्काले बताए । ‘हामी अनुसन्धान गर्दे छौं’, उनले भने,‘किन गरेको भन्ने बाहिर ल्याउँछौं ।’
पक्राउ परेका दुवै जना विराटनगरमा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेका प्रहरीले बताएको छ । उनीहरु पटक-पटक मदिरा सेवन गरेर कु’टपि’ट गर्ने पैसा माग्ने लगायतका काम गरेर प्रहरीको कारवाही परिसकेका छन् । प्रहरी प्रमुख खड्गाले पक्राउ परेकाको बारेमा विगतमा के कस्ता मुद्दा दर्ता भएको र अन्य कुन कुन अपराधमा मुछिएका छन् भनेर खोजी गर्न थालेको बताए ।
राजधानीमै कसरी घ’ट्यो यस्तो ड’रलाग्दो घ,टना? हेर्नुस्
ओली सरकार विरुद्द अब सडक आन्दोलन चर्काउने देउवाको यस्तो चेतावनी
हेलिकप्टर दुर्घटनामा सात जनाको निधन मध्येका घिमिरे को हुन त ?
आज राति नेपाली सेनाको टोली द्वन्द्वग्रस्त मुलुकतिर जाँदै